#4 Tantara any an-kafa… any Iraka: Fidinana an-dalambe tsy ankiato ataon’ireo Irakiana ao Bagdad hanoherana ny kolikoly na dia misy azan y tsy fandriam-pahalemana. - Transparency International - Initiative Madagascar
Nivoaka ny 02 Aogositra 2016 ao amin'ny Tantara any an-kafa
Efa amambolana maro izay dia Irakiana aman’arivony no manatontosa fihetsiketsehana eo amin’ny toerana Tahrir ao afovoan’ny Bagdad isaky ny zoma hitakian’izy ireo ny fanjakana tsara tantana sy hanoherana ny kolikoly. Na dia eo aza ny fampitandremana ataon’ny fitondràna dia mampitombo hatrany ny hetsika ataon’izy ireo ireto mpanao fihetsiketsehana mba hitondràn’ny governemanta fanovàna entina hanafoanana ny kolikoly amin’ny endriny rehetra. Tontosain'izy ireo io hetsika io mba hametrahana governemanta vaovao hahitana teknokraty sy olona mahavita mametraka ireo fanavaozana nampanantenain’ny Praiministra Haider Al-Abadi efa ho herintaona izay.
Nitaky ny fampiatoana ny fihetsiketsehana ny praiministra satria araka ny heviny dia manelingelina ny asan’ireo mpitandro ny filaminana sy tsy mampifantoka azy ireo amin’ny ady izay hatrehany manoloana ny vondrona jihadista “Etat Islamique” (EI) izany. Na eo aza anefa ny fisian’ny fampihorohoroana sy ny fibodoan’ireo EI ny faritra avaratra dia tsy mitsahatra ny manao ny fihetsiketsehany ireo olom-pirenena irakiana.
Mohamed Al-Darajadji, mapanatontosa horonan-tsarimihetsika sy mafana fo amin’ny hetsika dia nanambara tanaty lahateniny fa “Leo ny kolikoly izahay, mamono antsika ny kolikoly”. Nanamafy kosa I Abou Moushtaq, mpitolona iray hafa fa “Manana zo izahay ary maniry ny hitaky izany”, ary mangataka koa izy ny hamerenan’ireo mpanao politika ny “vola nangalariny”.
Radio Télévision Belge Francophone (RTBF) http://www.rtbf.be/info/monde/moyen-orient/detail_les-irakiens-manifestent-par-milliers-a-bagdad-non-a-la-corruption?id=9354386
L’Orient Le Jour http://www.lorientlejour.com/article/997308/irak-demission-de-cinq-nouveaux-ministres.html